Alat Category Download Free APK Android - I-BehApk
Izibuyekezo Zakamuva New Releases Popular Trending
Art & Idizayini
Okuzenzakalelayo & Izimoto
Izincwadi & Ireferensi
Amamephu & Ukuzulazula
Umculo - Okulalelwayo
Izindaba & Omagazini
Ukwenza kube ngokwakho
Ukuhamba & Indawo
Izidlali zevidiyo & Abahleli
Ikhaya › Izinhlelo zokusebenza › Archive by Category "Alat"
I-BehApk - Landa i-APK yamahhala ye-Android - © Wonke Amalungelo Agodliwe
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lwakho ngenkathi uzulazula kuwebhusayithi. Kulezi, amakhukhi ahlukaniswe ngokudingekayo agcinwa esipheqululini sakho njengoba abalulekile ekusebenzeni kwesizindalwazi esiyisisekelo.. Futhi sisebenzisa amakhukhi ezinkampani zangaphandle asisiza ukuba sihlaziye futhi siqonde ukuthi uyisebenzisa kanjani le webhusayithi. Lawa makhukhi azogcinwa esipheqululini sakho kuphela ngemvume yakho. Futhi unenketho yokuphuma kulawa makhukhi. Kodwa ukuphuma kwamanye alawa makhukhi kungase kuthinte umuzwa wakho wokuphequlula.
Amakhukhi asebenzayo asiza ukwenza imisebenzi ethile efana nokwabelana ngokuqukethwe kwewebhusayithi ezinkundleni zokuxhumana, qoqa izimpendulo, nezinye izici zezinkampani zangaphandle.